Ciise jidka keliya? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Dadka qaar ayaa diida caqiidada Masiixiyada sababta oo ah badbaadada waxaa suurto gal ah oo keliya Ciise Masiix. Bulshadeena tirada badan, dulqaad ayaa la filayaa, xitaa in la dalbado, iyo fekerka xorriyadda diimeed ee saamaxaya diimaha oo dhan mararka qaarkood waxaa loo tarjumaa qaab ay diimaha oo dhami isku mid yihiin.
Dhamaan waddooyinka oo dhan waxay u wada socdaan hal ilaahay. Dadka qaarkiis waxay yiraahdaan sidii iyagoo horeba wadada ugu jiray oo hadda ka soo noqday meeshii safarkaan. Dadka noocaas ahi uma dulqaadan karaan dadka fikirka cidhiidhiga ah qaba ee aaminsan inay jirto hal jid oo keliya oo diida wacdinta. Ka dib oo dhan, waxay ku andacoodaan in tani ay tahay isku day aflagaado oo lagu beddelayo dadka kale waxay rumeysan yihiin. Laakiin iyaga laftoodu waxay rabaan inay beddelaan waxyaabaha ay aamminsan yihiin kuwa rumeysan keliya hal jid oo keliya. Sidee hadda tahay Caqiidada masiixiga miyay baraysaa in Ciise yahay wadada kaliya ee badbaadada?
Diimaha badankood waa gooni. Yuhuudda oromada waxay sheegtaan inay hayaan wadada saxda ah. Muslimiintu waxay sheeganayaan inay ogaadaan waxyiga Ilaah ka yimid. Hindusku waxay aaminsan yihiin inay sax yihiin Buddhististuna waxay aaminsan yihiin naftooda. Xitaa jamacadaha casriga ah waxay rumeysan yihiin in jamacnimadu ay ka saxsan tahay fikradaha kale.
Marka dhammaan wadiiqooyinka oo dhami uma horseedaan isla ilaaha. Diimaha kala duwan xitaa waxay sharraxaan ilaahyo kala duwan. Hindidu waxay leedahay ilaahyo dhowr ah waxayna ku tilmaantaan badbaadada mid aan soo noqon lahayn. Muslimiintu, dhinaca kale, waxay xooga saarayaan monotheism-ka iyo abaalmarinta jannada. Midkoodna Muslim iyo Hindu midna ma aqbalidoono, jidadkooduna wuxuu u horseedaa isla ujeedo. Waxaad doorbidi laheyd inaad iska beddesho fikirkaas. Saaxiibbada reer Galbeedka waxay isu arkayaan inay yihiin dad is haya oo aan wax aqoon. Laakiin aflagaadeynta ama xitaa weerarada diimaha waa sida saxda ah ee mucjisaduhu aysan dooneynin. Waxaan aaminsanahay in farriinta masiixiga ay tahay midda saxda ah isla mar ahaantaana u oggolow dadka inaysan rumeysan. Sida aan u fahamsanahay, aaminaadku waxay u baahan tahay xorriyadda si dadku u oggolaan waayaan. Laakiin xitaa hadaan u ololeynno xuquuqda aadanaha inuu go'aan ka gaaro wuxuu doonayo inuu rumeysan karo, taa micnaheedu maahan inaan aaminsanahay in diimaha oo dhan ay run yihiin. U oggolaanshaha dadka kale inay rumaystaan ​​waxay rabaan micnaheedu ma aha inaan joojino rumaynta Ciise inuu yahay jidka keliya ee badbaadada.
Sheegashada kitaabiga ah
Xertiisii ​​ugu horreeyay ee Ciise waxay noo sheegaan inuu sheegto inuu yahay jidka keliya ee Ilaah. Wuxuu yiri ma geli kartid Boqortooyada Ilaah hadaadan raacin (Matayos 7,26: 27) oo innaguna lama mid nahay nolosha weligeed ah haddii aan diidno (Matayos 10,32: 33). Ciise wuxuu kaloo yiri kan soo socda: “Waayo, Aabbuhu ninna ma xukumo, laakiin wuxuu dadka oo dhan xukun u siiyaa wiilka, sidaa darteed dhammaan waxay Wiilka u sharfayaan sida Aabbaha u murweeyo. Kii aan wiilka murweeyn, ma murweeyo Aabbihii soo diray. (Yooxanaa 5,22-23). Ciise wuxuu sheegtey maxaa yeelay waa dariiqa keliya ee runta iyo madax furashada, dadka diida isagana wey diidaan Ilaah.
Yooxanaa 8,12:14,6 wuxuu dhahaa "Anigu waxaan ahay nuurka dunida" iyo Yooxanaa 7 wuxuu leeyahay " Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha; oo nin u yimaadaba aabbahay maahee aniga mooyaane. Haddaad i garateen, Aabbahayna waad garan doontaan. Oo hadda ka dib waad garanaysaan, waadna aragteen. Ciise qudhiisu wuxuu yidhi dadka sheegta inay jiraan siyaabo kale oo badbaadadu waa khalad. Butros wuu iska cadahay markii uu la hadlay taliyayaashii Yuhuudda: "Mid kale badbaadada ma jiro, mana jiro magac kale samada hoosteeda ah oo dadka loo bixiyey oo aynu ku badbaadi doonno" (Falimaha Rasuullada 4,12).
Bawlos sidoo kale wuxuu cadeeyay markuu yidhi dadka aan Masiixa aqoon waxay u dhintaan xadgudubyadooda iyo dembiyadooda (Efesos 2,1). Iyagu rajo ma laha, in kasta oo ay aamminsan yihiin diintooda, haddana Ilaah ma lahayn (V. 12). Waxa uu sheegay in ay jiraan hal dhexdhexaadiye oo keliya, hal dariiqa oo keliya loo maraa ilaahay (1 Timoteyos 2,5). Ciise wuxuu ahaa madaxfurashada qof walbaa u baahnaa (1 Timoteyos 4,10). Haddii ay jiraan jid kale oo horseedi kara badbaadada, Ilaahay ayaa abuuri lahaa (Galatiya 3,21). Adduunku wuxuu kula heshiiyay Ilaah xagga Masiixa (Kolosay 1,20: 22). Bawlos waxaa loogu yeedhay inuu injiilka ku dhex faafiyo quruumaha dhexdooda. Diintaadu, ayuu yidhi, waxay ahayd mid aan qiimo lahayn (Falimaha Rasuullada 14,15). Warqadda Cibraaniyada waxay horey u sheegtey inuusan jirin jid ka wanaagsan kan Masiixa ka wanaagsan. Si ka duwan dhammaan qaababka kale, waa mid wax ku ool ah (Cibraaniyada 10,11). Tani maahan faa iido qaraabo ah, laakiin farqiga u keena wax kasta ama waxba. Barista Masiixiyiinta ah ee badbaadada gaarka ahi waxay kuxirantahay waxa Ciise qudhiisu yidhi iyo waxa Kitaabka Quduuska ahi ina barayo, waxayna xidhiidh dhaw la leedahay cida Ciise yahay iyo baahida loo qabo nimcada.
Baahida aan u qabno naxariis
Baybalku wuxuu leeyahay in Ciise yahay Wiilka Ilaah qaab gaar ah. Isagu waa Ilaah qaab aadanaha. Wuxuu naftiisa u bixiyay badbaadadeenna. Ciise wuxuu ku tukaday hab kale, laakiin ma jirin (Matayos 26,39). Kaliya waxaan helnaa badbaado maxaa yeelay Ilaah qudhiisu wuxuu soo galay dunida aadanaha si uu u qaado cawaaqibka dembiga oo inaga xoreeyo. Taasi waa hadiyaddiisa anaga. Diimaha badankood waxay bartaan nooc ka mid ah shaqada ama wax u qabashada sidii jidka loo maro badbaadinta - dhaha salaadda saxda ah, sameeya waxyaabaha saxda ah iyo rajeynta in ku filan. Waxay baraan in dadku fiicnaan karaan haddii ay isku dayaan si ku filan. Sikastaba ha noqotee, iimaanka masiixiga wuxuu ina barayaa inaan dhamaanteen u baahanahay nimco maxaa yeelay marna ma noqon doonno wanaag ku filan inta aan isku dayno.
Suurtagal ma aha maxaa yeelay labadan fikradood ayaa isla run noqon kara isku waqti. Caqiidada nimcada ayaa ina baraysa, hadaan jecel nahay iyo haddii kaleba, ma jiro jid kale oo loo maro badbaadada.
Ka waran dadka dhinta ka hor inta ayan maqlin Ciise? Ka waran dadka ku dhashay Ciise intuusan noolaan? Wax rajo ah miyaad qabtaa? Haa, way leeyihiin. Sababtoo ah caqiidada masiixiga waa iimaanka nimcada. Dadka waxaa lagu badbaadiyaa nimcada Ilaah ee maahan in la yiraahdo magaca Ciise ama lahaanshaha Vienna gaar ah. Ciise wuxuu u dhintay dembiyada dunida oo dhan, iyadoo aan loo eegin inaad wax ka ogtahay iyo haddii kale (2 Korintos 5,14:1; 2,2 Yooxanaa). Dhimashadiisu waxay ahayd dhibbanaha magdhawga qofwalboo hore, hadda iyo mustaqbalkaba, ha ahaado Falastiin ama Peruvian. Waxaan hubin karnaa inuu Eebbe rumaysto eraygiisa, sababta oo ah waxa soo socda ayaa loo qoray: "Wuxuu leeyahay samir, adiguna dooni maayo in qof lumo, laakiin qof walba inuu helo baska" (2 Butros 3,9). In kasta oo jidadkiisa iyo xilliyadiisu badanaa yihiin kuwo aan la garan karin, haddana waan ku kalsoonahay maxaa yeelay isagu wuu jecel yahay dadka uu abuuray. Ciise wuxuu yiri: «Ilaah intuu dunida jeclaaday maxaa yeelay wuxuu siiyay wiilkiisa keliya oo dhashay, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah. Maxaa yeelay, Ilaah wiilkiisii ​​uma soo dirin dunida maxaa yeelay, isagaa xukumay dunida, maxaa yeelay, duniduu ku badbaadiyey isaga. (Yooxanaa 3,16-17).
Waxaan aaminsanahay tan iyo markii Masiixu sara kacay inuu ka adkaaday dhimashada. Sidaa darteed xitaa dhimashadu ma aha xudduud u dhaxeysa Ilaah iyo dadka. Ilaah waa karti u leeyahay inuu dadka ka dhaadhiciyo inay badbaadadooda u aaminaan isaga. Annagu garan mayno sida iyo goorta, laakiin waxaan rumayn karnaa eraygiisa. Sidaa daraadeed, waanu rumeyn karnaa, maxaa yeelay qaab ama qaab kale ayuu si kalgacal leh oo adag ugu hoggaamiyaa qof kasta oo weligiis noolaa ama weligiis noolaan doona inuu rumaysto badbaadadooda, midkood intuusan dhiman, intuu dhimashadeeda kadib. Haddii dadka qaarkiis u jeedsadaan Masiixa iyagoo rumeysan maalinta xukunka u dambeysa, ama ugu yaraan bartaan wixii uu ku sameeyey iyaga, ka dib runtii kama leexan doono iyaga.
Laakiin iyada oo aan loo eegin goorta dadka la badbaadiyey iyo sida ay si wanaagsan u fahmayaan badbaadadooda, waa Masiixa keliya oo lagu soo furtay. Ficillada wanaagga leh iyo shaqooyinka weligood ma badbaadin doonaan qof kasta, xitaa haddii dadku si daacad ah u rumaystaan, sababtoo ah way badbaadi doonaan haddii ay ku filan yihiin. Mabda'a nimcada iyo allabari ciise wuxuu macnaheedu yahay in qadar kasta oo camal wanaagsan ama shaqooyin diimeed aysan badbaadin karin qof. Haddii ay jiri lahayd sidan oo kale, Eebbe wuu noo suurto gelin lahaa (Galatiya 3,21). Haddii dadku si daacad ah isugu dayaan inay badbaadada ku helaan shaqo, ka fiirsasho, dib u eegis, is-dhiibid, ama haddii kale, way baran doonaan maxaa yeelay shaqooyinkooda iyo camalkooda Ilaah waxba kama samaynayaan. Badbaadadu waa nimco iyo nimco kaligeed. Iimaanka masiixiga wuxuu barayaa inaadan u qalmin nimco hadana wali qof walbaa wuu heli karaa.
Si kasta oo ay u maraan dariiqii diinta ee dadku qaateen, Masiixu wuxuu ku hagi karaa jidkiisa. Isagu waa Wiilka keliya ee Ilaah, oo sameeyey dembiga keliya ee dembiyada oo dhan qof kasta uu u baahan yahay. Isagu waa danjiraha gaarka ah iyo dariiqa marag u ah nimcada iyo furashada Ilaahay. Ciise qudhiisa ayaa taas ka marag furay taas. Ciise waa mid gaar ah oo loo dhan yahay waqti isku mid ah. Isagu waa wadiiqooyinka cidhiidhiga ah iyo badbaadiyaha dunida oo dhan. Waa habka kaliya ee lagu soo furan karo, walina waa u furan tahay qof walba. Nimcada Ilaah, oo si cad loogu muujiyey Ciise Masiix, ayaa ah waxa qof kasta u baahan yahay oo uu yahay warka wanaagsan maxaa yeelay si xor ah ayay ugu heli kartaa qof walba. Ma ahan oo keliya war wanaagsan, waa war weyn oo mudan in la faafiyo. D Runtii waa mudan tahay in laga fikiro.